Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Ogaden ee dagan dalka Switzerland oo heegan u taagnayd
Jaaliyadda Ogaden ee dagan dalka Switzerland oo heegan u taagnayd
Labadii maalmood ee dhagaysiga lagaga hadlayay xadgudubka Itobiya ay ku ahayso xuquuqul insaanka shucuubta ayay Jaaliyadda Switzerland ka hor dhigtay madasha uu ka socday shirka oo ahayd Xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva banaanbax ay ku soo bandhigayeen tacadiga xukuumada Itoobiya ay ku hayso shacbiga Soomaalida Ogadenya.
Dadki isu soo baxay ayaa waxay muujiyeen qiiro iyo sida ay uga go’antahay in ay caalamka u soo bandhigaan tacadiyada ay Itobiya xooga saartey inay ka qariso saxaafadda caalamka. Waxay jaaliyadda Ogadenya ee Switzerland ku balameen inta waddankoodu ka xoroobayo inay u taagnaadaan doonista xaqooda iyo sharaftooda uu gumeystuhu xalaashaday.
Waxaa xusid mudan in inta dibadbaxu ka socday banaanka Xarunta Qaramada Midoobay, gudahana lagu garaacayay xukuumada keli taliye Zenawi ,oo wafdigi uu soo dirsaday weji gabax kala kulmay goobti lagu dhagaysanayay xadgudubyada baniaadaminimada ka baxsan ee ay ku hayaan shucuubta ay gumeysato gaar ahaan dalka Ogadenya.
Waxaa hubaal ah in jaaliyadda Ogadenya ee Switzerland sawaxankooda iyo slogans-kii ay xa,baarsanaayeen uu ku reebay dareen shirka ka socday gudaha.
Waxaa cadaatay in aanu gumeysigu meelna ku nabad gelayn, ha ahaato goobaha dagaalka ama xarumaha caalamiga.
maa shaa allaah, guulayta jaaliyadda reer Ogaadeeniya ee iswiiska, sii giijiya.